မကြာသေးမီကထွက်ရှိထားတဲ့ ဝမ်းစာသီချင်းလေးအပိတ်ခံလိုက်ရတာကြောင့် ပေါက်ကွဲနေတဲ့ ယုန်လေး - Tha Dinn Oo
မကြာသေးမီကထွက်ရှိထားတဲ့ ဝမ်းစာသီချင်းလေးအပိတ်ခံလိုက်ရတာကြောင့် ပေါက်ကွဲနေတဲ့ ယုန်လေး
ယုန်လေးကတော့ အဆိုပိုင်းမှာရော သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာပါ ပရိသတ်အားပေးမှု အခိုင်အမာရရှိထားသူပါ။ Original Gangster ရုပ်ရှင်ကားနဲ့လည်း ပရိသတ်အားပေးမှု တခဲနက်ရရှိခဲ့သူပါ။ တစ်ယောက်တည်းဘဝမှာ ကြိုးစားရုန်း ကန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်…အခုဆိုရင် ယုန်လေးဟာ တက်သစ်စ rap အဆိုတော် လေးများနဲ့ ဝမ်းစာ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ပရိတ်သတ်တွေရှေ့ပြထားတာပါ
ယခုဆိုရင် ဝမ်းစာ သီချင်းလေး အဖျက်ခံရ . OG Page . မှာ မရှိတော့ဘူးရိုင်းဆိုင်းတာတွေလည်း ဘာမှမပါပါဘူး .ဖြစ်ပျက်နေတာကိုပဲ ဆိုထားတာပါ .နားလည် ကျွမ်းကျင်သူများ . ပြောပြကျပါ ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ တင်ထားခဲ့ပါတယ်..ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ အမြင်လေးတွေကို မှတ်ချက်ပေးသွားကြပါအုံးနော်….ယုန်လေးကို အရင်ကလိုပဲ အားပေကြပါအုံးနော
အခုလို အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…နောက်များမှာလည်း ယခုလို ဗဟုသုတရစရာများနှင့် ဆယ်လီတို့ရဲ့ သတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို LIke & See First လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအုံးနော်